IAG elinye lamaxabiso ekufuneka lithathelwe ingqalelo kwi-radar | Ezezimali
IAG elinye lamaxabiso ekufuneka lithathelwe ingqalelo kwi-radar
Esinye sezona sitokhwe sisebenzayo kwiimarike ze-equity okwangoku ngaphandle kwamathandabuzo ngumgaqo womoya we-IAG. Ngenxa yokungazinzi okuphezulu apho kuthengiswa khona izabelo zayo kuba zinokunyuka okanye ziwele phantsi kobunzulu obufanelekileyo, kwiimeko ezininzi ngamanqanaba angaphezulu kwe-3% okanye i-4%. Ukuba sesinye sezona zindululo ezifanelekileyo kwimarike yemasheya zokwenza imisebenzi yorhwebo. Ngaphandle kokuba ungowomgca weshishini uthathelwa ingqalelo njengesiqhelo.
Kwelinye icala, inika imali ephezulu kwizikhuseleko zayo kunye nevolumu yokurhweba ephezulu kakhulu kuzo zonke iiseshoni zokurhweba. Kuluhlu kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, njengenye yezona zibambiso zimeleyo kwaye ingumxholo wenxalenye enkulu yokusebenza ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuhamba kwiitayitile zakho kwisiqwenga esi phakathi kwe-4 ne-8 ye-euro ngesabelo ngasinye. Ngaphantsi kwendlela ekude kube ngoku ilungelelene ngokuthe ngcembe.
Ngelixa kwelinye icala, amaxabiso abo kuxhomekeka kwindaleko ekrwada kwiimarike zezemali. Ukuze ngale ndlela, amaxabiso anyuke okanye awe ngokuxhomekeke kule parameter ibalulekileyo yeemarike zezemali. Iya kuba yinto emisela ukuba ixabiso lezabelo zalo likhuphuke ukusukela ngoku. Akumangalisi ukuba le nto ibangele ukuba idweliswe kunye nokungazinzi okuphezulu okungenakulunga kakhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi abaneeprofayili ezilondolozayo. Umahluko onokufikelela kumanqanaba e-5% kwaye unokusetyenziselwa ukuthengisa okanye kwiseshoni enye yokuthengisa.
1 IAG: ngeoyile kwi $ 60
2 Inqaku ngokuchasene neBrexit
3 Lindela ukubona ukuba kwenzeka ntoni
4 Iindleko ekusebenzeni kwakho
5 Imbonakalo yeshishini
6 Iziphumo zekota
IAG: ngeoyile kwi $ 60
Okwangoku, ixabiso leoyile eliPhakathi laseTexas (WTI) liphezulu nge-5,5% ukuvala $ 62,43 umphanda Ukuphendula kukwehla okunamandla kweveki e-US, kwezigidi ezingama-9,5, kunye nendlela yesaqhwithi kwiGulf of Mexico enyanzelise ukukhutshwa kwamaqonga. Ngelixa kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba ekupheleni kokusebenza kwiNew York Mercantile Exchange (Nymex), ikontrakthi ye-WTI yexesha elizayo yokuhambisa ngo-Agasti inyuke nge-3,60 yeedola xa kuthelekiswa nomhla odlulileyo kwaye yafikelela kwelona xabiso liphezulu lokuvala kwezi veki zisixhenxe zidlulileyo.
Okwangoku, khange kubekho mkhuba ucacileyo kwixabiso lale asethi ibalulekileyo yezemali nalapho ukuvela kweemarike zezabelo kuya kuxhomekeka kwi-airline IAG. Ngesi sizathu, umngcipheko unokuba phezulu kakhulu kunakwamanye amacandelo emarike yemasheya. Kwaye le yinto yokuba ngokungathandabuzekiyo abatyali mali abavula izikhundla kwinkampani ukusukela kule mihla kufuneka bacinge. Kungenxa yokuba enyanisweni akukho mkhuba ucacileyo, nokuba kukwiqondo elinye okanye kwenye.
Inqaku ngokuchasene neBrexit
Ngelixa ngokuchaseneyo, olona tshaba lwakhe lukhulu ngu Ukuhamba kweBritane kumaziko oluntu. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha kwendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ngenxa yokuba, i-IAG lelinye lamaxabiso asesichengeni somvuzo waseSpain ngenxa yesi sibakala simangalisayo. Apho, amagosa aseBrussels aqinisekisile ukuba icebo le-IAG lokuthintela iBrexit "alinangqondo kwaphela" kuba becinga ukuba abatyali mali base-Bhritane abayiyo i-EU, ngokwe-Financial Times
Ngenxa yale meko, akukho mathandabuzo ukuba kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekhethekileyo kule-Ibex 35 idwelisiweyo kwinto enokwenzeka kwiintsuku okanye kwiiveki ezimbalwa ezizayo. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba uxinzelelo lokuthengisa lubekwe ngokucacileyo kwezinye iiseshoni zentengiso yesitokhwe. Ayigqibi ukuthatha kwaye iya isiba nzima kakhulu ukuba inyuke ifike kwi-8 ye-euro ngesabelo ngasinye, yenye yeenjongo zabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwinto eyenziweyo njengokunqongophala kwenkcazo exhalabisa kakhulu umdla wabo. Ngomngcipheko ocacileyo onokuthi uwele kumanqanaba ee-euro ezingama-4 okanye ngexabiso eliphantsi kwiimarike ze-equity.
Lindela ukubona ukuba kwenzeka ntoni
Ewe, kwiimeko zokunyuka, eyona nto isengqiqweni ukuyenza kukubamba utyalomali de amaxabiso angcono afezekiswe kwikoteyishini yayo okanye kude kuvela iimpawu ezibonisa ukuphela kwalo mkhwa, nangona ubeka emngciphekweni wokuwela kwiimeko ezingaqhelekanga ezinokuthi zenze ixabiso lihle kakhulu ngelahleko elandelwayo kwingxelo yakho yengeniso. Apho ubulumko kufanele ukuba buyeyona nto iphambili kwizenzo zabatyali mali.
Ke ngoko, kububulumko ngaphezu kokukhetha ifomula edibanisa i-equation kukhuseleko kunye nomngcipheko njengeqhinga lokugcina izixa ezikhutshiweyo. Ngokukodwa kula maxesha e-bearish apho kulula khona kwiinzuzo ezincinci ezifumanekayo ukuba zibe ziiseshoni ezimbalwa zokurhweba ngokubomvu kubatyali mali, ngengxaki emva koko malunga nokuba uthengise ngokukhubazeka okanye ungene nzulu kuwo. Kwinto emiselweyo njengenye yeemeko ezinokuhamba kule nkampani yendawo ekubhekiswa kuyo iinqwelomoya ezimfutshane, eziphakathi nezide.
Iindleko ekusebenzeni kwakho
Xa kuziwa ekulinganiseni inzuzo enokubakho kwintengiselwano nganye yesitokhwe, akufuneki kuphela ukuba sijonge umahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa, kodwa kufuneka songeze iirhafu zekhomishini zentengiselwano nganye yesitokhwe, kunye ugcino kwaye, ewe, isixa esiya kwi-Ofisi kaNondyebo, nge-18%. Yongezwe zonke-ezimele phakathi kwe-0,50% kunye ne-1,50% yeemali ezinkulu ezityaliwe-Iya kuba nakho ukufumanisa inzuzo yokwenyani yotyalo-mali, ethi kwimeko apho inzuzo enkulu ingabalulekanga, isenokungabinakho ukunciphisa impembelelo yekhomishini kunye nerhafu.
Oku kufanele ukuba kube ngumsebenzi ekufuneka wenziwe ngabo bonke abathengisi ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuthengisa okanye sokulinda inzuzo ephezulu. Ngokuchasene noko, xa iingeniso eziyinkunzi ezivelisiweyo zikhulu, okuncinci kuya kuba yimpembelelo yezi zixa-mali. Kwangokunjalo, aphezulu amaxabiso atyalwe-ngaphandle kokonyuka kwekhomishini- isezantsi ifuthe lawo kwiiakhawunti zokugqibela zomsebenzi ngamnye owenziweyo. Ngesi sizathu, kuyacetyiswa ukuba ukhethe esinye sezona zinikezelo zinikezelwa ziibhanki kunye neebhanki zokonga ukuze zisebenze kwimarike yemasheya, ethi kwezinye iimeko imele ukuya kuthi ga kwi-8% okanye kwi-15% isaphulelo.
Ngamaxabiso epetroli kunye nenqanaba lotshintshiselwano, i-IAG ilindele ukuba inzuzo yayo ekusebenzeni ngo-2019 ngaphambi kwezinto ezikhethekileyo ziya kufana naleyo ye-2018 proforma. Ngamaxabiso otshintshiselwano rhoqo, kulindeleke ukuba iyunithi yomvuzo wabantu abakhweleyo ihlale ingaguquguquki kwaye iindleko zeyunithi ngaphandle kwepetroli ziyakuphucuka xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Kwangokunjalo, umvuzo wabakhweli beyunithi ngokwamaxabiso otshintshiselwano rhoqo kulindeleke ukuba uphucule intsalela yonyaka.
Ezi ziziphumo ezingakhange zamkelwe kakuhle ngabameli abohlukeneyo kunye nabalamli bezezimali. Ngaphandle koluhlu, hayi ezantsi okanye phezulu. Ukuba akunjalo ngokuchaseneyo, kumhlaba ongathathi hlangothi apho ibifakwe khona iminyaka emininzi. Ukuya kwinqanaba lokuba ayikhange ithathe ndlela icacileyo. Kodwa ngokuchaseneyo, ihamba phakathi kwemida echazwe kakuhle kude kube ngoku. Ngaphandle kwalo naliphi na ixesha, kuye kwakho utshintsho olwenziweyo ngokubaluleka kwamaxabiso phakathi kwe-4 kunye ne-8 yeuros ngesabelo ngasinye. Kuya kufuneka silinde kwaye sibone ukuba iyaphula na kula manqanaba ukuze sithenge okanye sithengise izikhundla zayo kwimarike yemasheya.
Ikota yokuqala yenzuzo yokusebenza yayizi-135 yezigidi zeerandi ngaphambi kwezinto ezizodwa (i-2018 proforma1: € 340 yezigidi). Kwelinye icalaIngeniso yeyunithi yabakhweli kwikota yehle nge-0,8%, kwaye kumaxabiso otshintshiselwano rhoqo ehle nge-1,4%. Ngelixa iindleko zeyunithi zekota, ngaphandle kwamafutha, ngaphambi kokuba izinto ezizodwa zonyuke nge-0,8%, ngelixa kumaxabiso otshintshiselwano rhoqo nakwipro forma basis1 zehle nge-0,6%.
Kwiziphumo zalo zekota zamva nje, kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba iindleko zepetroli zekota zonyuke nge-15,8% kwaye amaxabiso otshintshiselwano anyuka nge-11,1%. Apho ifuthe lilonke lezibonelelo ze Iitransekshini zotshintshiselwano lwemali kwikota bezingalunganga Kwi- $ 61 yezigidi, ngelixa kwelinye icala, imali ibime kwi-7.481 yezigidi nge-Matshi 31, 2019, emele ukwanda kwe- $ 1.207 yezigidi xa kuthelekiswa noDisemba 31, 2018, kunye netyala elipheleleyo / i-EBITDA iphuculwe ngama-0,2 ukuya kumaxesha e-1,0. Ukugqiba ngokuphawula ukuba inzuzo emva kwerhafu ngaphambi kwezinto ezizodwa yayiyi-70 laes. Ngelixa iindleko zeyunithi zekota, ngaphandle kwamafutha, ngaphambi kokuba izinto ezizodwa zonyuke nge-0,8%, ngelixa kumaxabiso otshintshiselwano rhoqo nakwipro forma basis1 zehle nge-0,6%.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » IAG elinye lamaxabiso ekufuneka lithathelwe ingqalelo kwi-radar
Iindlela ezi-7 zokwenza ukonga kwakho kunenzuzo ngo-2019